I-Tamoxifen Citrate (Nolvadex) powder (54965-24-1) hplc =98% | AASraw
I-Tamoxifen Citrate (Nolvadex) ipowder
/ iimveliso / PCT Izidakamizwa / Tamoxifen Citrate (Nolvadex) powder
SKU: 54965-24-1. Udidi: PCT Izidakamizwa
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwinqanaba le-Tamoxifen Citrate (Nolvadex) powder (54965-24-1), phantsi kolawulo lweCGMP kunye ne-system control control quality.
I-Tamoxifen Citrate (Nolvadex) ividiyo ye powder
I-Tamoxifen Citrate (i-Nolvadex) i-powder Isiseko sabantu
igama: I-Tamoxifen Citrate (Nolvadex) ipowder
I-Tamoxifen Citrate (Nolvadex) ukusetyenziswa kwepowder kumjikelezo we-steroids
Amagama aseTamoxifen amaCitrate powder
I-Tamoxifen I-citrate powder nayo iyazi njenge-Nolvadex powder (i-CAS 54965-24-1).
Tamoxifen iCitrate powderUseage
Xa ulayisha phezulu kwi-anabolic steroids, umzimba ulungele ukukhutshwa kwemveliso ye-androgens okanye i-hormone yamadoda, ingakumbi i-testosterone. Ukunciphisa ukusilela kwe-androgens, umzimba uphuthukisa ukuveliswa kwe-estrogen.
Kuyathakazelisa ukuba le ngqungquthela ye-estrogen igxininisa ukukhululwa kwee-glycoproteins ezibizwa ngokuba yi-hormone-binding globulins okanye i-SHGB. Njengoko igama labo lithetha, i-SHGB iyabopha ukukhulula i-hormone yesini kwi-system kwaye iguqulwe ibe yi-estrogen, ifake amazinga e-testosterone nangaphezulu. Ukuba oku kungagqitywanga ngokufanelekileyo, umzimba uya kugqiba ukungalingani kwe-hormonal.
Isixwayiso kwi-Nolvadex powder
Izigulane zomhlaza zesifuba zaseTamoxifen zibonisa ubungqina bokunciphisa ukuqonda, umphumo omkhulu wecala le-tamoxifen kunye neememori zeememori zeememori. Nangona kunjalo ukukhubazeka kwememori kwizigulane eziphathwe nge-tamoxifen kwakunzima kakhulu xa kuthelekiswa nalabo baphathwa nge-anast-rozole (i-aromatase inhibitor) .Iqela elithile lamathambo egciwane lesifo sebele le-tamoxifen lifumana ukunciphisa i-libido.
Ingxelo ngoSeptemba 2009 kwi-Health and Human Services 'I-Arhente yoPhando lwezeMpilo kunye noBuncwane ibonisa ukuba i-tamoxifen, i-raloxifene, kunye ne-tibolone esetyenziselwa ukunyanga umdlavuza webele uya kuncitshisa kakhulu umdlavuza webele we-breast in the middle and women's older, .
Ezinye iziganeko ze-lymphedema ezisezantsi ziye zahlanganiswa nokusetyenziswa kwe-tamoxifen, ngenxa yamacandelo egazi kunye ne-vein thrombosis (DVT) enokuthi ibangelwa yileyeza. Isixazululo se-clots yegazi okanye i-DVT iyadingeka ngaphambi kokuba unyango lwe-lymphedema luqaliswe.
I-Nolvadex powder yigama eliqhelekileyo le-Tamoxifen i-Citrate powder, uhlobo lwesigqirha esichazwa njenge-modermator ye-estrogen ye-receptor (SERM) kwaye ekuqaleni yenziwe njengonyango lwezinye iintlobo zesifo somhlaza wamabele kwindoda nabasetyhini. Iyabangela ukuphazamisa isenzo se-estrogen emzimbeni, onokuba lula ukuphuma kwiitshathi emva kokusebenzisa i-anabolic steroid.
Ezinye izidakamizwa ze-SERM ezisetyenziselwa ulwaphulo lwezithuba zengqesho ziTorem-fareston kunye neComomid.
Ngokungafani ne-aromatase inhibitors ezinokumisa ngokupheleleyo umsebenzi we-estrogenic, umzimba we-SERM onjenge-Nolvadex powder kuphela ugxotha ukuveliswa kwemali engaphezulu kwe-estrogen ngoko ayiyi kususa imiphumo emibi, kodwa iyakushiya ngokwaneleyo ukuba umzimba usebenzise kwi-synthesis yayo iiprotheni kunye nomsebenzi wesisombululo.
Masibe negalelo elikhawulezileyo kwimiphumo ebalulekileyo eyenziwa yi-Nolvadex powder emzimbeni xa isetyenziswe kwi-PCT:
Ngokungafaniyo kunye ne-aromatase inhibitor (AI) kunye ne-Arimadex ne-Aromasin ekugqithiseni ukuba yintoni imiphumo efana ne-estrogen emzimbeni obangelwa kukungalingani okukhulu kwi testosterone, i-Nolvadex powder inceda ukubuyisela amanqanaba e-hormone kwizinto eziqhelekileyo ngokwahlukileyo indlela.
Ngoku xa i-Nolvadex powder iphazamisa umsebenzi wee-enzyme ze-aromatase kwaye igcina igxotha umkhiqizo ogqithiseleyo kunye nokukhululwa kwe-estrogen, ayikuphazamisi umsebenzi we-hormone ye-luteinizing (LH) nangayiphi na indlela. Ngeyona nto elula, i-LH inokulawula ukulawula i-gonads ukukhupha i-testosterone.
Ekubeni i-Nolvadex powder isebenza ngaphandle kokuphazamiseka kwe-LH, ukuyisebenzisa kwiinjongo ze-PCT ayinceda kuphela ukulungelelanisa ukulinganisela komzimba wamahomoni emva kokuhamba ngebhayisiki kunye ne-anabolic steroids kunye neprohormones, kodwa igcina isicatkage ye-testicular kwi-process.
I-Raw Tamoxifen i-Citrate powder (i-CAS 54965-24-1)
I-Tamoxifen Citrate (Nolvadex) I-Powder Marketing
Indlela yokuthenga i-Tamoxifen i-Citrate powder (CAS 54965-24-1): Thenga i-Nolvadex powder kwi-aasraw
I-AASraw inika ubungqina 99% Tamoxifen Citrate powder eluhlaza kubakhi bomzimba okanye iibhabhi zangaphantsi zokusetyenziswa komlomo.
I-Nolvadex powder Ukupheka: